ट्याग: ब्लगि cost लागत कति हुन्छ Martech Zone
ट्याग: ब्लगि costको लागत कति छ
यदि त्यहाँ एक चीज छ जुन तपाईंलाई वास्तविकतामा फर्काउँछ भने, यो ब्लगिंग र सोशल मिडियामा छलफल गर्न क्षेत्रीय व्यवसायहरूसँग भेट गर्दछ। संभावनाहरू छन्, यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ब्लगि,, सामाजिक मिडिया, सामाजिक बुकमार्किंग, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, आदि बुझ्नुहुन्छ। तपाईं अपवाद हुनुहुन्छ! 'ब्लागोसियर' बाहिर, कर्पोरेट अमेरिका अझै पनि एक डोमेन नाम फेला पार्न र एक वेब पृष्ठ राख्ने संग कुश्ती गर्दैछ। तिनीहरू वास्तवमै छन्! धेरै अझै वर्गीकृत, पहेंलो पृष्ठ र डायरेक्ट मेल हेर्दै छन्